xrdesktop: ichiri "kutsunga" kugadzirisa chaiko chokwadi paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Takatonyora kare zvimwe zvinyorwa muLxA about Collabora uye chirongwa chake chinonakidza wemusi mune iyo Valve Software irikubatiranawo kugadzirisa uye kuunza chaiyo chaiyo tekinoroji kune Linux desktops futi. Iko kutove nemamwe anonakidza akavhurika sosi mapurojekiti mune izvi, izvo pamwe neiyi zvinoita kunge zvine inonakidza uye inovimbisa ramangwana.
Zvino, vabati veCollabora vazivisa mhedzisiro yebasa ravo razvino, vhezheni itsva yexrdesktop. Kunyanya, iri nezve xrdesktop 0.14, iyo kunyangwe ichiri iri yekutanga vhezheni, yatove neinonakidza maficha uye mabasa e chaiyo chaiyo mune echinyakare windows mamaneja yedesktop yeGNU / Linux distros.
Kutenda xrdesktop inogona zvakare kushandiswa panguva yekumhanya yeiyo chaiyo chaiyo yekushandisa, kumiririra yechinyakare windows mukati meiyo 3D nzvimbo, ichibvumira kudyidzana navo uchishandisa chaiwo vatongi akatsigira.
Zvakare, izvozvi zvinosanganisira zvimwe zvakanaka kuvandudzwa. Imwe yeshanduko dzakakosha ndechekuti iko zvino yave kukwanisa kumhanya XR (yakasanganiswa chaiyo) nguva yekumhanya neOpenXR API. Iye zvino zvakare inotsigira OpenVR 1.11, iyo vhezheni nyowani yeiyi imwe chaiyo chaiyo API. Naizvozvo, inofanirwa kunge iine yakazara SteamVR rutsigiro.
Chiitiko chemamiriro akawedzerwawo, uko xrdesktop inomiririra nharaunda yese mune yemukati inopa uchishandisa lVulkan graphical API. Iko kune zvakare iripo mamiriro ekufukidzira, pamwe nekumwe kumwe kugadziridza uye kugadzirisa pamusoro peiyo yapfuura vhezheni.
Kana tikaramba tichifamba munzira iyi, Collabora inogona kugadzira xrdesktop nzira yakanakisa yekushandisa chaiyo chaiyo paLinux desktops. Ichokwadi ndechekuti chinotaridzika zvakanaka kwazvo uye vari kuchizadzisa pamwe nekufambira mberi kuripo panguva ino. Izvi zvinofanirwa zvakare kunzwisiswa semubatsiri wakanaka wepuratifomu, sezvo zvichizobatsira kutora VR paLinux uye kukwezva vamwe vashandisi vanozviramba nekuda kwekusapa izvo zvavari kutsvaga ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » xrdesktop: ichiri "gehena-yakakombama" pakuvandudza chaiyo chaiyo paLinux